Uncome ubuqhawe kuMvala ophume ngekhadi elibomvu uMngqithi weSundowns - Impempe
Uncome ubuqhawe kuMvala ophume ngekhadi elibomvu uMngqithi weSundowns
January 28, 2021 Impempe.com
Isenzo sikaMothobi Mvala weMamelodi Sundowns asihambelananga nomoya wasebholeni ogqugquzelwa yiFifa obizwa nge-Fair Play, kodwa emehlweni omqeqeshi wakhe uManqoba Mngqithi, lo mdlali uyiqhawe.
UMvala ubhodoloshe waphinde wadonsa ngejezi umgadli weBlack Leopards, uRodney Ramagalela obesemdojile wafika kuqala ebholeni futhi esezobhekana ngqo nonozinti uDenis Onyango. Empeleni nje uMvala wephule umthetho ukuvimba uRamaG ukuba ayoshaya igoli.
Uthole isigwebo esimfanele ke ngalesi senzo sakhe njengoba unompempe, uPhilangnkosi Khumalo emkhiphe ngekhadi elibomvu. Bese zibambene ngo 1-1 ngaleso sikhathi. Kodwa uMngqithi usincomile isenzo sakhe yize sishodise iqembu lakhe enkundleni.
“Indoba yenze obekufanele ikwenze,” usho kanje uMngqithi. “Uzinikelile, wafela iqembu. Angibonanga kahle kodwa bekungathi bekusekhona umdlali obesazokwazi ukumvimba umgadli. Benginenethemba lokuthi uzohlawuliswa ngekhadi eliphuzi, kodwa ngebhadi kwaba ngelibomvu.
“Kodwa uma ngikhuluma iqiniso nje, usisizile impela ngoba uRamaG usheshisa okonyanzi futhi ubesemshiya, siyazi ke ukuthi akaliyeki ithuba elinjenga leliya,” kuqhuba uMngqithi.
Uthe lesi sigameko sibe nomthelela omuhle eqenjini njengoba livuke injebomvu ngemuva kwaso, labuya ngamandla laze lagcina liwuwinile umdlalo ngo 2-1.
“Mhlawumbe lesiyana yisona sikhathi la iqembu lethu lijike khona izinto ngoba ngemuva kwalesi sigigaba iqembu libuye ngamandla, abadlali abangene besuka ebhentshini nalabo abebevele besenkundleni bazikhandle ngokuphindiwe,” kuchaza lommqeqeshi oneminyaka engu-49.
Uphinde wancoma nokaputeni weqembu, uHlompho Kekana wathi ukhombisile ukuthi usemdala ebholeni futhi ubuholi yinto yakhe. UKekana usanda kubuya ekulimaleni okumhlalise ngaphandle isikhathi eside.
“Ukaputeni uzithathele yena isinqumo sokuthi ayovala emuva, futhi wenze umsebenzi oncomekayo. Sichazekile ngoba siyakwazi abangakwenza laba bafana futhi kade ngangitshela abantu ukuthi mhla wabuya uKekana esewumqemane, uyolisiza kakhulu iqembu.
“Ngikholwa ukuthi namuhla ukuvezile lokho. Udlale enkulu indima ekuqinisekiseni ukuthi asixhamazeli ngemuva kwekhadi elibomvu, waqinisekisa nokuthi siyawuthola umphumela ebesiwufuna,” kuphetha lo mqeqeshi obuye aziwe ngelikaTV 4.
Previous Previous post: Uhlangule abaqeqeshi emlilweni uShalulile ewinisa iSundowns sekuvalwe amehlo
Next Next post: ‘UZlatan nokucwasa… Ihlaya phela lelo,’ kusho uPogba weManchester United